သာလွန်ဇောင်းထက်| October 31, 2012 | Hits:12,024
ရာဇာ October 31, 2012 - 3:56 pm လက်ရှိမြန်မာပြည်ရဲ့ အဖြစ်အပျက် တွေက ဖယောင်းတိုင်လို ဖြစ်နေတယ်…ဖယောင်းတိုင်သည် ရေနံကို ပြုပြင်ပြောင်းလဲ ရာမှ ရရှိလာသော ဘေးထွက်ပစ္စည်း အရည်ဖြင့် လိုသလို ပုံသွင်းပြီး အခဲအဖြစ် နှင့် ထုတ်လုပ် လိုက်သည်..ပြီးတော့ ထိုအခဲကို သုံးစွဲသူက မီးရှို့၍ သုံးသဖြင့် အရည်အဖြစ်သို့ ပြန်ရောက်ရှိသွား ပြန်သည်….ထိုအရည်များ ခဲသွားပြန်လျှင် ပြန်လည်ပြုပြင်၍ ဖယောင်းတိုင် အဖြစ် ပြန်လည်၍ ထုတ်လုပ်ကြ ပြန်သည်…ထိုကဲ့သို့ မြန်မာပြည်၌ ဖြစ်နေသော အဖြစ်အပျက် များသည်လဲ ဖယောင်းတိုင်ကဲ့သို့ အရည်ဖြစ်လိုက် အခဲပြန်ဖြစ်လိုက်နှင့် လုံးခြာလည် နေသည်မှာ အံ့သြစရာ တော့မဟုတ်ပေ….ခိုင်မာသော ဥပဒေ မရှိ..ရှိပြန်ရင်လဲ မလေးစား မလိုက်နာ ပြီးလျှင် တိတိကျကျ အရေးယူခြင်းမျိုး မရှိသ၍ ကာလပတ်လုံး ဒီမိုကရေစီ ဟုဆိုနေသော ခေတ်ကြီးနှင့် လွန်စွာမှပင် ဝေးနေမည် ဖြစ်ကြောင်း……………
Reply Tar Tee October 31, 2012 - 5:13 pm မထူးဆန်းပါဘူး လုပ်မြဲ လုပ်ဆဲပါဘဲ နောက်လဲလုပ်ကြအုန်းမှာဘဲ။
Reply mgmgzaw October 31, 2012 - 10:19 pm I agreed with you Ko Yar Zar.Excatly what you mention it.
Reply သာဒင် October 31, 2012 - 9:02 pm လာဘ်စားတဲ့သူရော ပေးတဲ့သူရော အရေးယူသင့်တယ်။
Reply ကြီးတော် November 1, 2012 - 8:25 am လူသိရှင်ကြားဖြစ်လာမှ ယောင်ယမ်းပြီးထလုပ်တာပါကွယ်။ တကယ်တမ်းလာဘ်စားသူတိုင်းအရေးယူကြစတမ်းဆိုရင် နိုင်ငံတာဝန်ထမ်းပါတယ်ဆိုတဲ့ နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းတွေထဲက ၉၉%လောက်ဟာအရေးယူခံကြရမှာပါ။ အထူးထင်ရှားသူတွေကတော့ လ၀က၊အကောက်ခွန်၊စည်ပင်၊လျှပ်စစ်၊ရဲ၊စစစ၊…..အို အားလုံးပါပဲ။ သမ္မတကြီးတောင်လွတ်ပါ့မလားမသိဘူး။
Reply kyawhanmyint November 1, 2012 - 9:37 am I agreed with you Ko Thar Din.
Reply FOX November 1, 2012 - 10:04 am အရေးယူခြင်းခံရသော သူများကိုသတင်းစာခေါင်းစီးပိုင်း၊ ဓာတ်ပုံနှင့်တကွဖော်ပြပေးစေလိုပါတယ်…ဒါမှနောက်နောင်အရှက်ရမှာပါ…သူ့ရဲ့မျိုးဆက်ပါထိခုိုက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် သူတုို့ရှောင်ကျဉ်ကြပါလိမ့်မည်ဟု ထင်ပါသည်။ လာဘ်ပေးတဲ့သူကိုလည်းထိုနည်းအတိုင်းသာအရေးယူပါ….လာဘ်ပေးလာဘ်ယူဆိုတာအတူတူပဲမို့လို့ပါ…
Reply ထင်ရာစိုင်း November 1, 2012 - 10:06 am 2006 ခုနှစ် က DG က ဦးခင်မောင်လင်း ပါ။
Reply စိုင်းအာကာမင်း November 1, 2012 - 10:18 am ကော်မရှင်ဖွဲ့.တော.မယ်ဆိုရင် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား ထဲးက ရွေးစေလိုပါတယ်။အဘယ်.ကြောင့်ဆိုသော် အစိုးရဝန်ထမ်းတွေမှာ မစားတဲ.လူ မရှိသလောက်ပါဘဲး
Reply သာဓု November 1, 2012 - 11:13 am လာဘ်စားတာက မဆန်းပါဘူး။အပေါ်က တပ်ကပြောင်းလာတဲ့ မိုးကျရွှေကို လူကြီးမင်းများကို ဆက်သရတဲ့ တစ်ပတ်စာ လေလံဈေးကလည်းမြင့်တာကိုး။မပေးပြန်တော့လည်း အောက်ကကောင်တွေကိုနှိပ်ကွပ်တာကို။အဲ့တော့ တပတ်စာကိုပေးဖို့ တောင်းတာမဆန်းပါဘူး။တပ်ကပြောင်းလာတဲ့ ဦးစီးအရာရှိဗိုလ်ကြီးများဆိုရင်ပိုဆိုးပဲ။တပ်ထဲမှာ
Reply Nyo Myint November 1, 2012 - 7:15 pm အကောက်ခွန်ဦစီးဌာန တွင် လာဒ်ပေးလာဒ်ယူ မှုများ ဟာ ယခင်ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးစံသောင်း လက်ထက် မှာ ပင် စတင်ခဲ့ပါတယ် ၊ ဦစံသောင်း ဟာသူ့အားပေးကမ်းနိုင်သော ဝန်ထမ်း များကို သာ နေရာကောင်း ပေးခြင်း ၊ ရာထူးတိ်ုးမြှင့်ပေးခြင်းတို့ကို ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ပါတယ် ။ နေရာ ကောင်း ရ ရှိဖို့ အကောက်ခွန်အရာရှိ အဆင့်ဆင့်ဟာ ဦးစံသောင်း ကို အပြိုင်အဆိုင် လာဒ် လာ ဘတွေ အမျိုး ပေးဆောင်ကြတာကလည်း ကြောက်ခမမ်းလိလိပါပဲ။ ပြည်နယ်မှူး များကလည်း နယ် ကောင်း များ ရောက်ရှိ ပြီဆိုပါက ထိုနယ်များမှနေ၍ လစဉ်လစဉ် သိန်းရာချီပြီး ပို့ပေးကြ ရပါ တယ်။ ပေးနိုင်တဲ့ သူများဟာ မန္တလေး ၊ လားရှိုး ၊ မူစယ် ၁၀၅ မိုင် ၊ မြဝတီ၊ တာချီလိတ် ၊ ကျိုင်း တုံ စတဲ့ မြို့ တွေကို ရောက်ကြ ပါတယ် ။ ရန်ကုန်မြို့ပေါ်မှာ ဆိုရင်လည်း ထုတ်သွင်းဌာနခွဲ ၊ အေး ရှားဝေါ ဆိပ် ကမ်း စတာတွေမှာ သူ့တပည့်တွေကို သာ နေရာချထားပေးပါတယ် ။
Reply unknown November 8, 2012 - 9:54 am ညိုမြင့်.. မင်းအဖေသာဝန်ကြီးတစ်ဦးဦးသာဖြစ်ခဲ့ရင်မင်းကောဘယ်လိုနေမလဲ။ သူ့ကုသိုလ်နဲ့သူ၊သူကံနဲ့သူဖြစ်လာတာ မနာလိုမဖြစ်စမ်းပါနဲ့ကွာ
Reply unknown November 10, 2012 - 6:42 pm လာဘ်ပေးလာဘ်ယူဖြစ်ရပ်တွေ လုံးဝပျောက်ကင်းချင်တယ်ဆိုရင် (၅)နှစ်သား(၅)နှစ်သမီးအရွယ်ကစပြီး အပေါ်အကြီးပိုင်းကိုအကုန်သတ်မှရမယ်။ (၅)နှစ်သား(၅)နှစ်သမီးအရွယ်ထိကစပြီး generation အသစ်နဲ့သွားမှရမယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အခုကျောင်းစနေတဲ့အရွယ်ကလေးတွေကအစ ဆရာမအတွက်အနည်းဆုံးပန်းတစ်ပွင့်ပေးရမယ်ဆိုတဲ့အစွဲက ကလေးတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာရှိနေခဲ့ပြီ။ ဒါမှမဟုတ်ရင်လာဘ်ပေးလာဘ်ယူဖြစ်ရပ်တွေလုံးဝပျောက်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ သမတကြီးအနေနဲ့ world bank ကအတိုးမဲ့ချေးတဲ့သန်း(၁၆၀)ထဲကပြည်သူသန်း(၆၀)ကို တစ်ယောက်(၁)သန်းစီခွဲပေးလိုက်ရင်တော့ဒီဖြစ်ရပ်တွေလုံးဝပျောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
Reply kumudra November 1, 2012 - 12:03 pm မှောင်ခိုပစ္စည်းတွေဆိုပြီး ဖမ်းဆီးဖို့ထက် ၊ ဘယ်ပစ္စည်းတွေကမှောင်ခို ၊ ဘယ်ပစ္စည်းတွေကို ပြည်သူတွေတစ်ဦးချင်း (သို့) ကုမ္မဏီတွေအနေနဲ့ ၊ တရားဝင် လွတ်လပ်စွာ ၊ တင်သွင်းရောင်းချခွင့်ရှိတယ် ။ ဘယ်ပစ္စည်း တွေက ဘယ်လိုအခွန်တွေကို ဘယ်လောက်နှုန်းနဲ့ ဆောင်ကြရမယ် ဆိုတဲ့ သတင်းအချက်အလက်တွေကို ၊ မီဒီယာများမှတဆင့် ၊ နိုင်ငံတော်က တရားဝင်ကြေညာပေးရင် ၊ အကောက်ခွန်လိုလို ၊ ကုန်သွယ်ခွန်လို်လို ၊ အမြတ်ခွန်လို်လို ၊ ဘာမှန်းမသိတဲ့ အခွန်တွေ ၊ ဘာမှန်းမသိတဲ့ ဌာနဝန်ထမ်းတွေရဲ့ ဒါဏ်က ၊ လွတ်ကင်းနိုင်ကြမှာပါ ။ နိုင်ငံတော်ကလဲ ရသင့်ရထိုက်တဲ့
Reply Saw November 1, 2012 - 12:03 pm (လာဘ်စားရင်-ထိထိရောက်ရောက်အရေးယူ)ဆိုရုံနဲ့ မပြီးပါ။လာဘ်မစားနိုင်အောင်လုပ်ရပါမည်။ငါ-ငါ့အမျိုး-ငါ့လူ မထိရင်ချသာချ ဆိုပြီးမလုပ်သင့်ပါ။အစိုးရပိုင်းမှအရင်ချမှတ်ထားတဲ့ လုပ်စားမူဝါဒတွေ အရင်ပြင်ပါ(ဥပမာ-permit control)။ပြီးရင်ဌာနဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းတွေ့ ကို ထိတွေ့ ဆက်ဆံနေရတဲ့လူတွေနဲ့ တွေ့ ဆုံဆွေးနွေးပြီး ပြင်ဆင်ရေးဆွဲပါ။ပြီးရင်ဝန်ထမ်းတွေကို သေသေချာချာလေ့ကျင့်ပေးပါ-ဂုဏ်ရှိရှိနေနိုင်အောင်လုပ်ပေးပါ။ ချိုးဖေါက်ရင်ထိထိရောက်ရောက်အရေးယူသလို မှန်မှန်ကန်ကန် ဆောင်ရွက်သူများကိုလည်းအသေအချာကာကွယ်ပေးဖို့ လိုပါသည်။အထူးသဖြင့်lawenforcementတာဝန်ဆောင်ရွက်ရသူများအားဥပဒေကိုမလိုက်နာ လိုတဲ့သူတွေက ရန်သူလိုပစ်မှတ်ထား ရန်ပြုတတ်ပါသည်(ဥပမာ-တိုင်စာ/ပစ်စာ ပို့ ခြင်း)။နိုင်ငံတကာမှ လာဘ်ပေးလာဘ်ယူပပျောက်ရေး လုပ်နည်းလုပ်ဟန်များကိုလေ့လာပါ။
Reply KoPYIChit November 1, 2012 - 12:27 pm We want punish to them death sentence same as chinese government style,so no custom new generation will not do like this corruption.
Reply ခပ်ညံ့ညံ့ November 5, 2012 - 4:48 pm အဲဒီ နောက်လာမယ့် New Generation မှာ မင်းကို ( KoPYIChit ကို ) ခန့်ထားပေး မယ်လေ၊ ဒါမှ နောက်တစ်ကြိမ် Death Sentence ပေးရင် မင်းလည်းပါသွားအောင်၊ ( ရီစရာပြောတာပါ၊ ကာစတန်မှာ အလုပ်ခေါ်ရင် မင်းသွားမလျှောက်နဲ့ဦးနော်) အခုဖြစ်နေတာတွေအားလုံးဟာ လူကြောင့်ဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးကွဲ့ အမောင်ပြည်ချစ်ရဲ့၊ မူတွေကြောင့် ဖြစ်နေတာ၊ မယောင်ရာဆီလူးနေကြတာ၊ အကောက်ခွန်ကိုမယုံလို့ဆိုပြီး တပ်ကလူတွေထည့်တယ်၊ (ထူးမခြားနား) အဲဒါကြောင့် တပ်ကလူတွေကိုမယုံလို့ဆိုပြီး အထူးတပ် ( ထောက်လှမ်းရေး) တွေထည့်တယ် (ထူးမခြားနား၊ ပိုဆိုး)၊ အဲဒါတွေမလုံလောက်လို့ဆိုပြီး ဒေသအာဏာပိုင်တွေက အဖွဲ့စုံတွေနဲ့ ၀င်ကိုင်တွယ်ကြပြန်တယ် (ထူးမခြားနား၊ ပိုပိုဆိုး) ပိုပြီးထိန်းချုပ်နိုင်အောင်ဆိုပြီး နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးက၀င်ချုပ်ကိုင်ပြန်တယ် (ထူးမခြားနား၊ ပိုပိုပြီးဆိုး) ဒါတွေဟာ ဘာကိုပြနေသလဲဆိုရင် မူကမမှန်လေတော့ ဘယ်သူဘဲလာလုပ်လာလုပ် ဒီစနစ်ကြီးထဲမှာ မျောသွားတာပေါ့၊ လူကြီးတွေက မိမိတို့အမှားတွေကို မမြင်ဘူး သို့မဟုတ် မမြင်ချင်ဟန်ဆောင်နေကြတယ်လေ၊ မူဝါဒအမှားတွေနဲ့ သွားနေမှတော့ နောက်ထပ် ကြိုက်သလောက်လာခဲ့ New Generation၊ ဒီအတိုင်းဘဲသွားနေမှာဘဲ၊ ၀န်ထမ်းက လစာနဲကမလုံလောက်၊ မူဝါဒတွေက ခိုးမစားရင် မရအောင်လုပ်ထား၊ ခိုးစားမှ လုပ်ငန်းတွေပိုပြီးအဆင်ပြေအောင်လုပ်ထား၊ အခွင့်အရေး ပိုလိုချင်လို့ ပေးတဲ့သူကပေး၊ လစာနဲ့မလောက်ငှလို့ ယူတဲ့သူကယူ၊ ခိုးတဲ့သူကခိုး၊ ဘယ်လိုတားဆီးမလဲ၊ မရနိုင်ပါဘူး၊ ဒါတွေကိုပပျောက်ချင်ရင် မူဝါဒပိုင်းမှားယွင်းမှုတွေကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ၀န်ခံပြီး ဥာဏ်ပညာအမြှော်အမြင်ရှိသူတွေ ပညာရှင်တွေနဲ့ သေသေချာချာညှိနှိုင်း
Reply konay man November 1, 2012 - 3:08 pm သတင်းကောင်း
Reply ဘာ အမှန်လဲ November 1, 2012 - 11:46 pm ကာစတန်ဝန်ထမ်းတွေ လာဘ်ယူလို့ အရေးယူခံနေရတာ မရှိဟု အကောက်ခွန်ဌာန ငြင်းဆို
Reply taunglethar November 2, 2012 - 10:34 pm အကောက်ခွန်ဆိုတဲ့အတိုင်း အခွန်ဘဲကောက်ပြီး အသားအားလုံးသူတို့စားတာ နိုင်ငံတော်က အခွန်ဘဲရတာ ကော့သောင်းကိုဝင်လာတဲ့သင်္ဘောစက်လှေ တွေအားလုံး စစ်ဆေးကြည့်ပါ duty ပါတာက ငါးပုံတစ်ပုံပဲရှိတယ် အစိုးရသစ်က ကိုင်တွယ်မယ်ဆိုပြီးအသံဘဲဟစ်နေတာ ဘာမှအလုပ်မပြဘူး ကော့သောင်းသင်္ဘောလိုင်းက ကာစတန်ညွှန်မှုးဦးမြတ်လှပိုင် ၅၃၃ ပုဂံ ဖားအံ သင်္ဘောသုံးစီးစလုံးအစစ်အဆေးမရှိ စင်းလုံးပြတ်ခိုးတာ ခိုးတယ်ဆိုတာ တကယ်တော့ပေါင်းစားနေတာပါ စီးပွါးကူးသန်းဝန်ကြီးခင်္ဗျာ ကော့သောင်းကခုရက်ပိုင်းဝင်လာမမည်သည့်သင်္ဘောမဆို မယုံရင်စစ်ဆေးကြည့်ပါ ဦးမြတ်လှကိုမဖမ်းရဲတော့ကျန်တဲ့လှေတွေကလည်းအားလုံးလိုက်ကြလို့ တားမဲ့သူမရှိ စစ်မဲ့သူမရှိ တာဝန်ရှိသူများမယုံရင်ဝင်သမျှလှေစစ်ကြည့်ပါလို့။ဲ့
Reply Kyaw Mg November 3, 2012 - 11:24 am That persons who are illegally gotten the money should be shown the photos , in the all the journels.
Reply Waddy November 3, 2012 - 2:38 pm နာတာရှည်ရောဂါကို ပရုတ်ဆီလိမ်း မန်းမှူတ်ရုံမျှသာဖြစ်ပါသည်။
Reply Waddy November 3, 2012 - 3:08 pm နာတာရှည်ရောဂါကို ပရုတ်ဆီလိမ်း မန်းမှူတ်ရုံမျှသာဖြစ်ပါသည်။
Reply ကျော်စိုး November 4, 2012 - 7:47 pm ကြာတော့ကြာခဲ့ပါပြီ။ တစ်ခါတစ်လောက် သတိရရင် ပြန် ဖေါ်ပါ။ အစထဲက ရှိနေတာ။ အကခ နဲ့ လ၀က အပြိုင်
Reply မြို့ကြီးသား ငပွ November 6, 2012 - 7:02 am ကျော်စိုး မင်းကို လူပျက်ဌားမယ် ။ ပိုပြီးပြောနိင်အောင် မင်းအရင်ဝန်ထမ်းဝင်လုပ်လိုက် (မြက်စား/ဘုံဘိုင်ရေသောက်/ဗိုက်မှောက်ပြီး) ပျက်လုံး တွေစုဆောင်းလိုက်အုံး။သံခမောက်နဲ့သံမဏိအက်ျီဝတ်ထားဖို့ မမေ့နဲ့ နော်။ တော်တော်ကြာ ပျက်လုံး မပြောရခင် ပြုတ်တဲ့အထဲပါသွားအုံးမယ်။
Reply unknown November 6, 2012 - 5:47 pm အေးညိုမြင့်ရေ နင်လည်းကိုယ့်ကိုကိုယ်ပြန်မေးကြည့်ပါဦး။ }ငါကောလူကြီးနေရာရောက်ရင်နောင်တော်ကြီးများရဲ့လမ်းစဉ်ကိုမလိုက်ဘူးလို့ }နင်ကောကိုယ့်ကိုကိုယ်အာမခံနိုင်ရဲ့လား၊ ဟားဟားဟား။
Reply shwethaungyin November 8, 2012 - 9:09 pm ကိုညိုမြင့် ရေးတာတွေကမှန်လွန်းအားကြီးနေတော့ လက်ရှိအကောက်ခွန် က ၀န်ထမ်းတစ်ဦးဖြစ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။ ခုလိုဖြစ်ရတာ 2006 ခုနှစ်မှာ ၀န်ကြီးချုပ် ဦးစိုးဝင်းနဲ့ သူ့တပည့်ဦးတင့်နိုင်သိန်း တို့ (၂)ဦး ပေါင်းပြီး အသစ်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့နကသ ၀န်ထမ်းတွေ